Binaya Shekhar's Blog - MeroReport
Binaya Shekhar's Blog (37)
मानौ तपाईका फलोअर धेरै छन् र तपाई कुनै एउटै बिषय, उही कुरा, लगातार ट्वीट गर्नुहुन्छ । आफ्नो ब्लग लिंङ्क अनावश्य रुपमा सेयरीङ गर्नुहुन्छ, अरुका ट्वीटलाई रिट्वीटमात्र गर्नुहुन्छ? यसोगर्दा तपाईका फलोअरले नयाँ सूचना पाउलान्? उनीहरुले के बुझ्लान् र तपाईलाई कस्तो प्रतिकृया देलान्? अरुले के सोच्छन् होलान्? पहिले @iPagalbasti हाल @MadsArea भन्छन्, “मलाई त त्यस्तो बेलामा इरिटेट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा म पहिले त्यसो गर्ने साथीहरुलाई तर्क सहित सुझाव दिन्छु, र पनि सुनेन भने ब्लक हान्दिन्छु…
Added by Binaya Shekhar on February 13, 2017 at 12:30pm —2Comments
किन दुर्गम छ मुस्ताङ ?
मुस्ताङको घाँसा पुग्दानपुग्दै हामीलाई चिसो सिरेटोले मजैले स्पर्श गर्न थालिसकेको थियो । निश्चित थियो- यात्रा जतिजति उत्तरतिर अघि बढ्दै जान्छ, चिसो सिरेटोको दर पनि उही हिसाबमा बढ्नेछ । हामीले धौलागिरि, अन्नपूर्णलगायत हिमाललाई दक्षिणतिरै छोडिसकेका थियौं । चिसो मौसमको सुरुवात, ढल्किँदै गरेको दिन र खाल्डाखुल्डी तथा ढुंगे बाटोबाट उत्तरतर्फको हाम्रो यात्राको त्यो दिन, जोमसोम पुग्दासम्म त बजार पूरै बन्द भइसक्छ होला । घरबाहिर सायदै मान्छे भेटिएलान् ।…
Added by Binaya Shekhar on December 27, 2016 at 4:33pm — No Comments
दिल्लीमा झन्डै बिचल्ली !
अनपेक्षित थियो दिल्लीमा केही परिचित मित्रहरुसँगको भेटघाट । त्यसैले रमाईलो पनि भयो । दिल्ली बसाईको दोश्रो साँझ केही पुस्तक किन्ने योजना बन्यो । नेपालन्युज डटकमका सम्पादक अर्पण श्रेष्ठले स्थान सुझाए, ‘खान मार्केट’ । गुगलले पनि दिल्लीको खान मार्केटमा तीनवटा पुस्तक पसल देखायो । ब्यस्त दिल्लीको लजपत नगरनजिक सीरीफोर्डबाट खान मार्केट जानलाई बल्ल एउटा टेम्पो पाईयो । हामी ६ जना थियौ । दुईटा टेम्पो चाहिन्थ्यो । साँझ ७ बजिसकेको हुनाले एउटा टेम्पो पाउने बित्तिकै …
Added by Binaya Shekhar on November 24, 2014 at 2:30pm — No Comments
युरोपमा शौचालय खोजी
'पर्ले फसेँ,' मैले यस्तै शब्दमात्र सुनेँ, अर्थ्याउन सकिनँ। अनि अनुरोध गरेँ, 'म फ्रेन्च बुझ्दिन, कृपया अंग्रेजीमा बोल्न सक्नुहन्छ?' मेरो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एउटी अफ्रिकन मूलकी अधबैंसे महिलाले अन्य महिला पुरुषकै अगाडि ‘फसेँफसेँ’ भन्दै मेरो हात समातिन्। के भनेको होला भनेर बुझ्न नपाउँदै उनले हातै समातेर तान्न थालेपछि मेरो होसहवास उड्न थालेको थियो। अनुहारको ताप एक्कासि बढेको अनुभव भयो। लाजले गाला राता र ताता भए। के हुँदैछ यहाँ, के हुन लाग्यो मैले अनुमान लाउन नपाउँदै उनले मलाई तानेकी थिइन्। जब…
Added by Binaya Shekhar on December 23, 2013 at 10:13pm — No Comments
दोबाटोमा जिन्दगी: आमाले हार्नुभयो, मैले जिते र म बाँचे!
न खानको टुङ्गो छ, न थाकेको बेला आराम गर्ने फुर्सद नै । बिहान जुरुक्क उठ्छु, चिया होस् या केही नास्ता जे पाकेको छ अलिकति खान्छु, अनि हिड्छु । मायाको भोक आँखामा सजाएर मलाई नै सर्बस्व ठान्ने श्रीमती र छोरालाई अँगालोभरी माया दिन नसकी नसकी ढोकाबाट बाहिर खुट्टा राख्छु । यस्तो लाग्छ म हिडिरहेको छैन दौडिरहेकोछु । बेलुका अबेर घर फर्कन्छु, जे पाकेको छ खान्छु । दिनभरीको थकाईले होला खासै धेरै बोलचाल नगरीकन ओछ्यानमा पल्टिन्छु । बाउ आउला, एकछिन खेल्ला, होमवर्क सिकाईदेला, ट्याब्लेटमा एकछिन टेम्पल रन खेलौला…
Added by Binaya Shekhar on May 22, 2013 at 8:00am — No Comments
प्राथमिक शिक्षामा दादागिरी र अभिभावक
दृष्य १:- काठमाण्डौ उपत्यकाको नाम चलेको एउटा बिद्यालय । प्रवेश परिक्षाका लागि फारम लिनेको लामो लाईन । नजिकै केही थान कार्टुनजस्ता वाकसमा प्रश्नपत्र र परिक्षा सहयोगी किताव (यदि ठुलो कक्षाको भए त्यसलाई अबस्य गेसपेपर भनिन्थ्यो) बेच्दै गरेका मौसमी झोले व्यापारी । रु ५०० तिरेर फारम लिएपछि हरेक अभिभावहरु त्यहाँ जान्छन् र रु २०० तिरेर Practice Book किन्छन् । बेच्नेले पोहोरपरार सालको प्रश्नपत्र भन्दै नमुना प्रश्नहरुको थप चाङपनि कितावसँगै भिडाउँछन् । संगै प्रवेश परिक्षाका लागी ३००० जति अभिभावक…
Added by Binaya Shekhar on April 4, 2013 at 11:30am —7Comments
'कसरी भन्ने बुढा कण्डम लगाउ?'
महिलाहरु सेतीदेवी मन्दिर परिसरमा भेला हुने तरखर गर्दै थिए आकाश गडगडाउन थाल्यो । एकैछिन अगाडिसम्म झलमल्ल घाम लागेको थियो । गाउँ नजिकैको पहाडमाथि मडारिइरहेको कुहिरो कालोबादलमा बद्लीयो । झल्याक झुलुक, गड्याङ गुडुङ अनि एकैछिनमा पानी दर्कियो । छलफलका जुटदै गरेका महिलाहरु बिस्कुन उठाउन, गाइबस्तु स्याहार्न र घरका झ्यालढोका बन्द गरेर मन्दिर परिसरमा भेला भए । असिना फाट्टफुट्ट मन्दिरको छतमा बर्सिर्दै गर्दा सामान्यभन्दा ठुलो स्वरमा समुहकी सहजकर्ता शान्ति सिग्देलले कुरा शुरु गरिन्…
Added by Binaya Shekhar on March 26, 2013 at 9:30pm — No Comments
शुसासनका सवाल र सोसल मिडिया
जहाँ शुसासन (good governance) हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार (corruption) हुन्न भन्ने आमबुझाई सत्यताको नजिक छ । तथापी शुसासन भनेको त्यतिमात्र हैन । शुसासन भनेको कुनै पनि देशको आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक काम कार्वाहीहरुको व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने बिषय हो । शुसासनले…
Added by Binaya Shekhar on February 18, 2013 at 8:00am — No Comments
पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, केपी ओली, शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, बिजय गच्छदार, राम बहादुर थापा, सुर्य बहादुर थापाका बीचमा समानता केही छ भने त्यो हो सबैको आँखामा हरदम चश्मा झुन्डिरहन्छ । माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव सधैभरी चश्मा झुन्डाउने नेताभित्र पर्दैनन् तर उनीहरु चश्मै नलाउने भने हैनन् ।
झलनाथ, सुशील र प्रचण्डको चश्माले नजिकबाट देखेको र भोगेको अर्को समानता हो चड्कन । उनीहरु तीनैजनाका चश्मा मुन्तिरका चिल्ला गालामा…
Added by Binaya Shekhar on December 6, 2012 at 2:00pm — No Comments
इन्टरनेट, हाम्रा नेता र अन्तरक्रिया
इन्टरनेटको लोकप्रीयतासँगै हाम्रा नेताहरुले पनि बिभिन्न किसिमले इन्टरनेटको उपयोग गरिरहेकाछन् । नेकपा एमालेका नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीका आ—आफ्नै वेवसाइट छन् । www.jnkhanal.com अध्यक्ष खनालको वेवसाइट हो । केही महिना पहिले बन्द भयो भन्ने खबर छापिएपनि खनालको वेवसाईट हिजोआज अद्यावधिक देखिन्छ । त्यसैगरी एमालेकै बरिष्ठ नेता माधव नेपालको व्यक्तिगत वेवसाईटको ठेगाना www.madhavenepal.com हो । यो साइट…
Added by Binaya Shekhar on November 29, 2012 at 8:30pm —6Comments
सञ्चार प्रतिष्ठान र सोसल मिडिया नीति
सन् २०१० जुलाई, अन्तराष्ट्रिय सञ्चार प्रतिष्ठान सिएनएनले आफ्नो संस्थामा २० बर्ष सेवा गरेकी मध्यपुर्व बरिष्ठ सम्पादक अक्टाभीया नास्र्लाई अचानक बिदा गर्यो । कारण थियो उनले ट्वीटरमा पोष्ट गरेका १४० अक्षर । तीनै १४० अक्षरका कारण जागिरबाट हात धोएकी नास्र्ले आफ्नो स्पष्टिकरणमा भनेकी छन्, “कुनै पनि विवादीत बिषयमा आफ्ना बिचार राख्नलाई १४० अक्षर पर्याप्त जोखिमले भरिएका छन्, जसको म आफै उदाहरण हुँ ।” जागीरै जाने गरी उनले ट्वीटर ह्याण्डलमा के लेखिन् त? उनको ट्वीट यस्तो थियो, "Sad to hear of the passing…
Added by Binaya Shekhar on September 2, 2012 at 11:00pm — No Comments
̕तिमीलाई थाहा छ त्यो केटी को हो?̕
̕थाहा छ, उसको नाम सुमित्रा हो । थर परियार । पल्लोघरमा डेरा गरेर बसेको बर्षौ भयो । पद्मकन्या कलेजमा बिए तेश्रो बर्षमा पढ्छे ....̕
̕ओहोहोहो, मेरो बारेमा तिम्लाई त्यति थाहा छैन, त्यो कालिको बारेमा त्यत्रो इन्फर्मेशन? मैले माने, तिमी पुरुषहरु लभ गरुन्जेलमात्र ठिक पार्छाै, बिहेगरेपछि आफ्नो असलीयतमा आउछौ । मलाई अहिलेसम्म कस्ती राम्री भन्याछौ? त्यो चाँही काली, हिस्सी परेकी, बोल्ड, के के हो के के? हैन स्वास्नीको अगाडि त्यस्ता…
Added by Binaya Shekhar on August 31, 2012 at 7:56am — No Comments
सकारात्मक सोचौ, राम्रो गरौ
हिलोमा कमल फुल्छ भनेझै समस्याकै बीचमा हाम्रो देशको मानव विकास सुचकांक सुधारोन्मुख छ । यसपाली देशको आर्थिक बृद्धिदर बढेको छ । हिजोआज गाँउँगाउँमा बिद्यालय खुलेका छन् । पहिले घाँसदाउरामा मात्र सिमित हाम्रा छोरीचेलीहरु स्कुलमा भेटिन्छन् । चुल्होचौकामा सिमित दिदी, भाउजु, आमा, हजुरआमा अहिले संसारका अत्याधुनिक…
Added by Binaya Shekhar on August 8, 2012 at 8:30am —3Comments
एक कप कालो चियाको भरमा जन्मियो गाउँमा किताव
बिहान ८:५० भएको हुदो हो । “..बाहिरको तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियस छ..” भन्ने बाक्यले एक्कासी झसंङ्गै बनायो । एकछिन अगाडिसम्म मुस्कुराउँदै ओहोर दोहोर गर्ने एयर होस्टेसको प्रीय बोली यतिबेला भने प्रीय सुनिएन । उनको हाँसो मिश्रीत बिदाई अभिवादन पनि खल्लो लाग्यो । जहाजको ढोकाबाट टाउको बाहिर के निस्केको थियो तातो हावाले…
Added by Binaya Shekhar on June 18, 2012 at 10:30pm — 15 Comments
यसरी शुरु भयो मेरोरिपोर्ट
कुरा यसरी शुरु हुन्छ, अक्टोवर २००९ ताका अमेरीकी बिदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम डिआरएलले एउटा प्रस्ताव आह्वान गर्यो । जसले नेपालको लोकतान्त्रिक सक्रमणमा स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेसकोबारेमा काम गर्ने इच्छुक र क्षमतावान संस्थालाई प्रस्ताब पेश गर्न भनिएको थियो । रेडियोमा अुनभवी र सूचना…
Added by Binaya Shekhar on May 2, 2012 at 2:30pm —7Comments
माओवादी सेना पुनःस्थापनापछिको समाज
अन्ततः शिबीरमा बाँकी रहेको माओवादी सेनाको संख्या तीनहजारको हाराहारीमा झर्यो जो नेपाली सेनामा प्रबेश गर्छन् या गर्दैनन् अझै अनिश्चित छ । साढे ६ हजारसम्म लडाकु नेपाली सेनामा जाने सहमतिका आधारमा भएको पुनःबर्गिकरण प्रकृयामा यो संख्या घटेर अलिहेको अबस्थामा आइपुगेको हो । नेपाली सेनामा भर्ना हुदाँका कठिन प्रकृया र तालिम अबधि आदी कुरामा रुची नभएर समायोजनमा जान अनिच्छुक भएको चर्चा गरिएपनि सम्मानजनक समायोजनको संभावना नदेखेपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरुमा अनिच्छा बढेको तर्क गर्नेहरुको भनाईमा केही आधार…
Added by Binaya Shekhar on April 19, 2012 at 10:02am — No Comments
जातको लडाईः बाहुन हुनुको घमण्ड
म उच्चजातीय ब्राम्हण । उपाध्याय खानदानको केटो । बुबा भन्नुहुन्छ हजुरबा गाउँमा नाम चलेका पण्डित । तत्कालिन बालागुरु षडानन्दका चेला हुनुहुन्थ्यो रे मेरा हजुरबा । तीनटी फुपुहरुको पनि खान्दानी बाहुन र पण्डितहरुसँगै घरबार भयो । हजुरबाबाको रवाफकै कारण होला दुईटी हजुरआमाका सात छोरा चार छोरीको जन्म । बुबाको बिहे अहिलेभन्दा झन्डै ७० बर्ष अगाडि त्यसगाउँमा ठुलै धाक जमाएर बसेका 'थरी' भट्टराईकी छोरी, गाँउप्रमुखकी बैनीसँग भयो । नजिकदेखि टाढापर्ने सबैतीरका नातागोतामा उपाध्याय बाहुनको धाक र रबाफ नडगमाउने…
Added by Binaya Shekhar on April 14, 2012 at 7:30pm — No Comments
सामाजिक सञ्जाल, केटाकेटी, आदीमानव र किशोर नेपाल
कन्याम, वाह क्या रमाईलो, फुसफुसे कुहीरो, सिमसिमे पानी